Maraykanka, 21 February 2019
Khamiis 21 February 2019
Soomaali ku guuleystay golaha deegaanka Barron, Wisconsin
Isaaq Cabdi Maxamed (Gaaddaay) ayaa ku guuleystay is reeb reebka doorashada golaha deegaanka ee magaalada Barron, gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykankan.
Trump: Kama dalban Whitaker in uu magacaabo qof i taageersan
Mareykanka oo digniinti ugu danbeysay siiyay Daacish
Ciidamada isbaheysiga uu hogaamiyo Mareykanka ayaa digniin ku siiyay dagaalyahanno lagu sheegay in ay yihiin kuwi ugu danbeeyay Kooxda Daacish ee Suuriya in ay is dhiibaan ama ay la dili doono.
USA: Farsamada Nukliyeerka oo la Doonayey in Sacuudiga la Siiyo
Warbixintan oo Talaadadii shalay ka soo baxday Conngresska Maraykanka ayaa lagu sheegay in La-taliyihii hore ee Aminga Qaranka Micheal Flynn iyo labo kalkaaliye oo uu lahaa ay iska dhago tireen digniino is-xigxigay oo sheegayey in dadaaladoodu ay jabinayeen sharciyada Maraykankan.
USA: 16 Gobol oo Maxkamad la Tiigsanaya Maamulka Trump
16 gobol oo ka mid ah maamullada gobollada Mareykanka ayaa magdhow weydiisanaya maamulka Madaxweyne Donald Trump, ka dib ku dhawaaqiddiisii xaaladda deg degga si uu dhaqaale ugu helo derbi uu doonaayo in laga dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico.
USA: Nauert oo ka Cudurdaaratay Xilka Danjiraha Q.M.
Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in Nauert ay u diidday xilka loo magacaabay kaddib marki la ogaaday in gurigeeda ay muddo 10 sano ah ka shaqeysay haweeney si sharci darro ah ku daganeyd Mareykanka, taasoo u heyn jiray carruurta.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo qaran si uu uga maarmo in Kongreska uu u ansixiyo lacag uu doonayo in uu ku dhiso xadka Mareykanka iyo Mekisko.
Mareykanka oo kafakaraya in Guantanamo uu maxaabiis hor-leh geeyo
Saraakiisha dawladda Maraykanka ayaa ka baaraan degayada in qaar ka mid ah xubnaha argagixisada ah ee lagu qabtay dalka Siiriya la geeyo xabsiga Guantanamo Bay
Trump oo ku dhawaaqi doona xaalad deg deg ah
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in uu ku dhawaaqo xaalad deg deg ah oo qaran si uu uga maarmo in Kongreska uu u ansixiyo lacag uu doonayo in uu ku dhiso xadka Mareykanka iyo Mekisko.
Aqalka Hoose oo taageeradii militari ka jaray isbaheysiga Sacuudiga
Aqalka Hoose ee Mareykanka oo ay Dimuquraadiyiintu ku badan yihiin ayaa shaley go'aamiyey in in ay taageerada milatari ka jareen isbahaysiga uu Sucuudigu hogaamiyo ee Yemen ka dagaalamaya.
Haweenay u Basaasaysay Iran oo Dambi lagu Helay
Sarkaal hore oo ka tirsaneyd ciidanka cirka ee Maraykanka, qeybtiisa sirdoonka, taas oo u carartay dalka Iran 6 sano ka hor ayaa lagu soo eedeeyey inay dawladda Iran siisay macluumad dhinaca militariga la xiriira oo aan la ogoleyn in la ogaado
Trump: Kuma qanacsani heshiiska la gaaray
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanu u riyaaqsanayn heshiiska ay wada gaadheen sharci dajiiyayaasha kaasi oo ah dhismaha xayndaab xaddidan laga yagleelo xadka u dhexeeya Maraykanka iyo Mexico.